XOG: Wakiilka QM ee Somaliya, Swan oo mar kale ku baaqay doorasho xor ah oo ka dhacda Jubbalaan | HalQaran.com
Home Wararka Maanta XOG: Wakiilka QM ee Somaliya, Swan oo mar kale ku baaqay doorasho...
XOG: Wakiilka QM ee Somaliya, Swan oo mar kale ku baaqay doorasho xor ah oo ka dhacda Jubbalaan
Kismaayo (Halqaran.com) – Wakiilka gaarka ah ee Qaramada Midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya, James Swan ayaa ku baaqay in doorashooyinka maamulka Jubbalaan ay ahaadaan kuwo xor iyo xalaal ah.
Qoraal ah oo uu diray danjiraha Guddiga Doorashooyinka Jubbalaan ayuu ku tilmaamay in tallaabooyinkii ay guddigu uu qaadeen ay ahaayeen kuwo gaabis ah.
Guddiga Goorashooyinka Jubbalaan ayaa dib u furay diiwaan gelinta musharrixiinta iyo kordhinta xilliga ay dhacayso doorashada madaxweynaha, taasoo beesha caalamku ay u aragto muddo aan ku filneyn.
Mr. Swan ayaa ku baaqay in la qaado tallaabooyin lagu ballaarinayo hannaanka doorashooyinka si ay u noqdaan kuwo hufan oo mudnaanta siiya arrimaha siyaasadda iyo dhaqaalaha.
”Hadii aan la tixgelinin cabashada saamileyda siyaasadda Jubalaan waxaa jiri doonta khatar ku aaddan in aan lagu wada farxin lagu wada kalsoonaan natiijada geedisocodka doorashada taas oo muhiim u ah midnimada iyo xasilloonida Jubalaan” ayuu yiri Ergayga Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya.
Wakiilka Qaramada Midoobay ee Soomaaliya, ayaa sheegay in haddii aan xal buuxa laga gaarin arrimaha waaweyn ee uu muranku ka taaganyahay ay halis tahay in natiijada doorashada ay weydo taageerihii lagama maamrmaanka u ahaa ee lagu ilaalinayay midnimada iyo xasilloonida Jubbalaan iyo waliba dib u dhiska guud ee dowladnimada Soomaaliya.
Maalmihii ugu dambeeyay ayay beesha caalamka wadday dadaallo ay maamulka uu hoggaamiyo Axmed Madoobe ay uga dhaadhicinayso in hannaanka doorashada maamulka uu noqdo mid hufan oo siyaasiyiinta mucaaradkuna ka qeyb qaataan.
Xafiisak Halqaran.com, Kismaayo
James Swan; Doorasho xor ah
Wakiilka QM ee Somaliya
axmed August 18, 2019 At 20:32
Madaxa Qramada midoobey, wuxuu ka cabsanayaa, in la eryo isagana. waa cadaan, wax alla wixii farmaajio ku qayliyo ,waa sax ayuu leeyahay.